June 4, 2019 - BaHuThuTaGabar
“မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာ သတိုးသမီး ဖခင်က သားမက်ကို ပြောလိုက်တဲ့ စကား…”
မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာ သတိုးသမီး ဖခင်က သားမက်ကို ပြောလိုက်တဲ့ စကား… မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာ သတိုးသမီး ဖခင်က သားမက်ကိုပြောတယ် …။ သူမကို ပထမဆုံး ပွေ့ဖက်သူက ငါပါ… မင်း မဟုတ်ဘူး ” သူမကို ပထမဆုံး နမ်းရှုံ့ခဲ့သူကလဲ ငါပါ… မင်း မဟုတ်ဘူး ” […]
“အသက် ၁၆ နှစ် မှ ၂၄ နှစ်အတွင်း မိန်းကလေးများ ဖတ်ဖို့ပါ ….”
အသက် ၁၆ နှစ် မှ ၂၄ နှစ်အတွင်း မိန်းကလေးများ ဖတ်ဖို့ပါ ….. ညီမလေးရေ…….. လှပတဲ့ မျက်နှာ တစ်ခုက တစ်ချိန်ကျရင် အိုမင်းသွားလိမ့်မယ် ။ စွဲမက်စရာ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းတွေကလည်း တစ်ချိန်ကျရင် ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် မိန်းမကောင်း တစ်ယောက်ကတော့ […]
ရင်သားကို တင်းရင်းစေရုံသာမက ကြီးထွားအောင်ပါ ဒီနည်းနဲ့ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် ….
ရင်သားကို တင်းရင်းစေရုံသာမက ကြီးထွားအောင်ပါ ဒီနည်းနဲ့ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် …. ရင်သားကို တင်းရင်းစေရုံသာမက ကြီးထွားအောင်ပါ ဒီနည်းနဲ့ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် …. ရင်သားသေးလို့ အားမရဘူးလား။ ဒါမှမဟုတ် တင်းရင်းမှုမရှိဘဲ ပျော့ပျော့ကြီးဖြစ်လို့ စိတ်ညစ်နေလား…? ဒီလိုပြဿနာမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေး တစ်ခုပဲ ပေးမယ်နော်။ အဲ့ဒါကတော့ […]